HD VideoBox 2.9.3 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 2.9.3 လွန်ခဲ့သော3လက
Application များ မီဒီယာအမျိုးမျိုး HD VideoBox
HD VideoBox ၏ ဖော်ပြချက်
Чтобы перенести историю со старой версии приложения - сделайте резервную копию в старой версии, в настройках - сохраненные данные. В новой версии, восстановите резервную копию.(возможно прийдется переименовать папку FSVideoBox в HDVideoBox)
Поиск видеофайлов происходит на сайтах moonwalk.cc, tree.tv, zona.mobi, filmix.net, my-hit.org, tivio.net, kino-rex.com, kinokong.net. В настройках можно выбрать, по каким ресурсам производить поиск.</br>
HD VideoBox အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
HD VideoBox အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
HD VideoBox အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
HD VideoBox အား အချက်ပြပါ
dkc7dev စတိုး 134 32.33k
HD VideoBox နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း HD VideoBox အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 2.9.3
App Name: HD VideoBox
Release date: 2018-02-24 15:48:56
လကျမှတျ SHA1: 06:72:6D:E6:EF:B2:7B:1D:D1:8C:75:5B:12:19:08:1F:5A:E2:D3:70
အဖှဲ့အစညျး (O): dkc7dev
HD VideoBox APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ